Izixhobo Zokufunda IBhayibhile | JW.ORG/XH
Dawunlowuda ezi zixhobo zokufunda iBhayibhile uze uzifunde nencwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Hlola iinkolelo zakho, funda oko kufundiswa yiBhayibhile uze ufunde indlela onokulumela ngayo ukholo lwakho.
KHETHA APHA Isahluko Ezintsha Ezindala
Ubuya kuthini ukuba bekukho umntu othi “uThixo uyabohlwaya abantu abenza izinto ezimbi ngokubenza baphile ubomi obunzima”?
Ngaba inokwenzeka into yokuba ube ngumhlobo kaThixo?
IBhayibhile yabhalwa ngabantu, kodwa iyincwadi evela kuThixo’ njani?
Ezinye iinkcukacha eziseBhayibhileni zisenza siqiniseke ukuba iBhayibhile ibhalwe nguThixo.
Ukuba injongo yakhe kukuba umhlaba ube yiparadesi, kutheni ungeyiyo ngoku?
Ngaba uThixo ucebe ukuba ibe ngabantu abasombulula iingxaki zehlabathi?
Ungamphendula njani umntu othi uYesu wayengumntu nje oqhelekileyo?
Unokuphendula uthini xa umntu esithi uYesu uyalingana noThixo?
UYesu wabonisa njani ukuba namandla kunye nokuthantamisa kwangaxeshanye?
Intlawulelo—Esona Sipho Sikhulu SikaThixo (Inxalenye 1)
Ngaba ungalufumana usindiso ngemisebenzi yokholo?
Intlawulelo—Esona Sipho Sikhulu SikaThixo (Inxalenye 2)
Ukufa komntu omnye kangangamawakawaka eminyaka edluleyo kunanto yakwenza nantoni nobomi bam?
Baphi Abafileyo? (Inxalenye 1)
Ngaba baphila kwenye indawo? Ngaba batshiswa esihogweni?
Baphi Abafileyo? (Inxalenye 2)
Ngaba ukufa kwadalwa?
Ukuba ubuhlungu, ngaba loo nto ithetha ukuba awunalo ukholo kuvuko?
Unokumphendula njani umntu othi ithemba lovuko liyintsomi?
Kutheni uThixo eza kuba nabalawuli abangabantu ezulwini, ekubeni eneengelosi ezininzi ezinyanisekileyo ebenokukhetha kuzo?
Yintoni obusele buyenzile uBukumkani bukaThixo? Yintoni obuza kuyenza kwikamva?
Abanye abantu bakufumanisa kunzima ukukholelwa ekubeni siphila kwimihla yokugqibela. Ziziphi izizathu onazo zokuqiniseka ukuba sekukufutshane ukuba ipheliswe le nkqubo yezinto?
IBhayibhile iyathetha ngezinye zezinto ezintle eziza kwenzeka kwimihla yokugqibela.
Ngaba iingelosi zikhona? Ngaba zikho iingelosi eziyingozi? Sebenzisa esi sikhokelo sokufunda ukuze ufumane iimpendulo.
Ngaba ikho into ephosakeleyo ngokuzama ukunxibelelana nemimoya?
Ukuba uThixo unamandla, ngaba asinguye obekek’ ityala ngezi zinto zimbi zenzekayo?
IZibhalo zinempendulo ecacileyo neyanelisayo kulo mbuzo unzima.
Ngaba unokuba ngumhlobo kaThixo? Hlola oko ukukholelwayo, isizathu sokuba ukukholelwe uze ujonge oko kufundiswa yiBhayibhile.
Ngaba sinako ukumkholisa uThixo nakuba uSathana esenzela iingxaki?
Kufuneka umgudu ukuze ukwazi ukuphila ngemigaqo yeBhayibhile. Ngaba oko kuluncedo?
Ubomi sisipho esivela kuThixo. Singabonisa njani ukuba siyabuhlonela ubomi bethu nobabanye?
Esi sikhokelo sokufunda asizokukunceda nje wazi iinkolelo zakho ngokutofelwa kwegazi nendlela yokusebenzisa igazi kodwa siza kukunceda ukwazi ukuzichaza iinkolelo zakho kwabanye.
Indlela Yokwenza Intsapho Yakho Yonwabe (Inxalenye 1)
Yintoni eyona nto inokwenza konwatywe emtshatweni? Phanda ngeenkolelo zakho, hlola iimfundiso zeBhayibhile, funda neendlela onokuchazela ngayo abanye iinkolelo zakho usebenzisa esi sikhokelo sokufunda.
Indlela Yokwenza Intsapho Yakho Yonwabe (Inxalenye 2)
Umzekelo owamiselwa nguYesu, unokubanceda njani abazali nabantwana? Hlola iinkolelo zakho noko kufundiswa yiBhayibhile.
Unqulo Olumkholisayo UThixo (Inxalenye 2)
Ngaba kwanele nje ukuthi uyakholelwa kuThixo ukuze akholiswe nguwe? Okanye ngaba ufuna abakhonzi bakhe benze okungakumbi?
Ngaba uThixo uyafuna siyibhiyozela imihla yokuzalwa, iiholide zonqulo nokusebenzisa imifanekiso xa simnqula? Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile esebenzayo kulo mba?
Unokuzichaza njani ngobuchule iinkolelo zakho kwangaxeshanye uzihlonele iimbono zabanye?
Funda oko kuthethwa yiBhayibhile ngendlela nexesha esinokuthandaza ngalo.
Ubhaptizo Nolwalamano Lwakho NoThixo (Inxalenye 1)
Kutheni amaKristu kufuneka ebhaptiziwe? Yintoni efanele ikhuthaze amaKristu ukuba abhaptizwe?
Ubhaptizo Nolwalamano Lwakho NoThixo (Inxalenye 2)
Ngaphambi kokuba umKristu azinikele kuThixo zintoni ekufuneka azenze? Ukuzinikela komKristu kuThixo kwenza enze eziphi izigqibo emva kokuba ezinikele?
Ubhaptizo Nolwalamano Lwakho NoThixo (Inxalenye 3)
Yintoni elindelekileyo kumKristu ozahlulele kuThixo? Kutheni amaKristu amthanda ngokunyanisekileyo uThixo eqinisekile ukuba anokuphila ngemithetho yakhe?